Muuri News Network » SAWIRO: Suldaan Ibraahim Cali Xaaji oo kamid ahaa Wafdigii DF halka Malyan Dollar oo la kulmay Siilaanyo..
SAWIRO: Suldaan Ibraahim Cali Xaaji oo kamid ahaa Wafdigii DF halka Malyan Dollar oo la kulmay Siilaanyo..
Madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa xalay casho sharaf u sameeyey Wafdigii dowladda Federaalka Soomaaliya u dirtay Somaliland ee deeqda lacageed ku oo gaareysa hal milyan oo doollar looguna talagalay dadka ay abaaraha saameeyeen ee ku dhaqan deegaanadaasi.
Weftigaas oo ka koobna 12 xubnood oo isugu jira salaadiin, culimaa’udiin, ganacsato iyo haween, waxaana kulanka cashada ka qeybgalay madaxweynaha Soomaaliland, xubnaha ka tirsan maamulkiisa iyo mas’uuliyiin kale.
Suldaanka Guud ee Beesha Biimal Suldaan Ibraahim Cali Xaaji, oo kamid ahaa mas’uuliyiin halkaasi dhowaan gaaray oo kulanka cashada ka hadlay ayaa u mahadceliyay mas’uuliyiinta iyo shacabka Soomaaliland si wanaagsan oo ay u soo dhoweeyeen mudadii ay halkaasi ku sugnaayeen.
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan, oo ah guddoomiye ku xigeenka hay’adda culimada Soomaaliyeed ayaa sheegay in la isku gurmado in ay tahay mid qeybka ah Islaamnimada, walaaltinimada iyo Soomaalinimada isla markaana sidan oo kale ay Soomaaliland sameeyeen xilligii abaaraha ay ka jireen koofurta Soomaaliya sanadkii 2011ka.
Wasiirka madaxtooyada Somaliland, Maxamuud Xaashi Cabdi,wasiirka diinta iyo owqaafta Sheekh Xasan C/salaam, oo kulanka ka hadlay ayaa si weyn ugu mahadceliyay wefdiga u soo gurmaday dadka walaalahooda ah oo ay abaaraha halakeeyeen.
Ugu dambeyn madaxweynaha maamulka Soomaaliland, Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo hadalka qaatay ayaa dhankiisa mahad naq balaaran u jeediyay dadkii u soo istaagay in ay gurmad la soo gaaraan dadka dhibaateysan.
Dhanka kale wefdiga ururada bulshada rayidka ah oo gurmadka gaarsiiyay deegaanada ay baarta saameysay ayaa saaka ku soo wajahan magaalada Muqdisho kadib markii howshii ay halkaa u tagaan ay u soo dhamaatay.